ကလေးငယ်များတွင် အရိုး၊အဆစ်နဲ့ကြွက်သားများ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း - Hello Sayarwon
ကလေးငယ်များတွင် အရိုး၊အဆစ်နဲ့ကြွက်သားများ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေးတို့ပြုလုပ်ပါက သင်အရိုးကြွက်သားနှင့်အဆစ်တို့ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရေးကြီးသောအပိုင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတ်တတ်ရပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း ခုန်ခြင်း သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာထိုင်ခြင်းတို့ကိုတောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရိုးက သန်မာသလောက်ကျိုးလွယ်သည်။ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း နှင့် အဆစ်( အရွတ် (အရိုးနုတွယ်ဆက်အရာ) ) များက ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ရောဂါဖြစ်ပါက ပျက်စီးနိုင်သည်။
၁။ အရိုး အဆစ် ကြွက်သားတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ။
အရိုးသည်ခန္ဓါကိုယ်ရှိပြောင်းလဲနေသောတစ်ရှုးဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ အရိုးများစုပြီး အရိုးစုဖြစ်စေသည်။ အရိုးစု ကြွက်သား အရွတ် တွယ်ဆက်ပစ္စည်း နှင့် အခြားအဆစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများက ကြွက်သားအရိုးစုစနစ်ကိုဖြစ်စေတာပါ။ အရိုးစုက သန်မာခြင်း တည်ငြိမ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး ကြွက်သားများက လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန်အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ အရိုးက အတွင်းရှိကလီစာများကိုကာကွယ်ပေးသည့် အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါသေးတယ်။
ကြွက်သားများက အဆစ်ကိုဆွဲပြီးလှုပ်ရှားစေတယ်။ ဒါတွေအပြင် ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားခြင်း၊ သန်မာခြင်း( ဥပမာ – အစာဝါးခြင်း နှင့် အစာအိမ်စနစ်အတွင်းသို့ရောက်စေခြင်း) စသည့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းလုပ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်က သင်ခန္ဓါကိုယ်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကူညီပေးပါတယ်။ အချို့သောအဆစ်များက အဖွင့်အပိတ် ပိတ်ကားကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ (ဥပမာ ဒူးခေါင်းနှင့် တံတောင်ဆစ်) အချို့အဆစ်များက ရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှုကိုပေးပါတယ်။ -ပုခုံးသို့မဟုတ် ပေါင်အဆစ် ဥပမာ အနောက်၊ အရှေ့၊ ဘေး နှင့် လည်ပတ်လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
၂။ ကလေးနှင့်လူကြီးတွင်ဖြစ်တတ်သော အရိုးအဆစ်ကြွက်သားထိခိုက်မှုတွေကဘာလဲ။
အရိုးကျိုးခြင်း။ အရိုးကျိုးခြင်းသည် အရိုးတွင် အက်ခြင်း၊ ပြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အရိုးကျိုးခြင်းက တိုက်ရိုက်သက်ရောက်အားကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို တိုက်ရိုက်မဟုတ်တဲ့အားများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားဖြင့်လိမ်ခြင်း နှင့် ကြွက်သားကျုံခြင်းပြင်းထန်ပါက အရိုးကျိုးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်ချော်ခြင်း။ အဆစ်ချော်ခြင်းသည် အရိုးပုံမှန်နေရာမှ ကွာသွားခြင်းပါ။ ပြင်းသော သက်ရောက်အားများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့အရိုးများ ဥပမာ ပုခုံး သို့မဟုတ် လက်ချောင်းက အဆစ်ချော်လွယ်တတ်သည်။ အကြောင်းကတော့ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အရိုးနှင့် တွယ်ဆက်တစ်ရှုးများရဲ့ ကာကွယ်မှုနည်းသောကြောင့်။
အဆစ်လွဲခြင်း။ အဆစ်လွဲခြင်းသည် အရွတ်တွင် ပျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် လှုပ်ရှားနေသောအတိုင်းအတာမှ အရိုးကအားတစ်ခုဖြင့်အတွန်းခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအားက အရွတ်ကိုလုံးဝစုတ်ပြဲစေပြီး အရိုးကိုအဆစ်လွဲစေသည်။ အရိုးလဲကျိုးစေတတ်သည်။
ဖိအားများခြင်း။ ကြွက်သားနှင့်အရွတ်ကို ဆွဲဖြဲခြင်း ဆွဲဆန့်လိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းဟုတစ်ခါတစ်ရံခေါ်သည်။ များသောအားဖြင့်လေးလွန်းသောအရာကိုမခြင်း ကြွက်သားအလုပ်လုပ်မှုများခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရပ်လှုပ်ရှားလိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ လည်ပင်း ကျောရိုး ပေါင်ရှေ့ အနောက် နှင့် ခြေထောက်အနောက်ပိုင်းတို့တွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ကြွက်တက်ခြင်း။ ထိခိုက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကြွက်တတ်ခြင်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းစွာလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်သို့မဟုတ် ခြေထောက်ကိုပုံစံတမျိုးတည်းအကြာကြီးထားပါက ဖြစ်တတ်သောနာကျင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
၃။ အရိုး အဆစ်နှင် ကြွက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာလက္ခဏာတွေကဘာလဲ။
ကလေးအရိုးကျိုးခြင်း အဆစ်ချော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ရှိနိုင်သောလက္ခဏာတစ်ချို့ရှိပါသည်။ နာခြင်း ယောင်ခြင်း ဖြစ်သောဘက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း ပုံသဏာန်ပြောင်းသွားခြင်း သွေးယိုခြင်း ထိခိုက်မိချိန်တွင် တကျွတ်ကျွတ်အသံကြားခြင်း ခံစားမိခြင်းတို့ရှိတတ်သည်။
၄။ ကလေးတွင် အရိုးအဆစ်သို့မဟုတ် ကြွက်သားထိခိုက်မှုရှိပါက ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ရှေးဦးကုထုံး။ ဖြစ်သောနေရာကိုကာကွယပေးခြင်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်ထားခြင်းတို့လုပ်သင့်သည်။ ထိခိုက်မိသောနေရာကို ဖြောင့်အောင်လုပ်ရာ ပုံစံပြောင်းရန်မလုပ်သင့်ပါ။ ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ရေခဲရေဖြင့် တစ်နာရီတစ်ခါ ၁၅မိနှစ်ခန့်ကပ်ပါ။ ဒဏ်ရာအပွင့်ဖြစ်ပါကမလုပ်သင့်ပါ။ ရှော့ရှိနေပါက လိုအပ်လျင်ကုပါ။
အောက်ပါအချက်များရှိပါက ၉၁၁ ကိုခေါ်ပါ။ သွေးခုန်နှုန်းအားနည်းခြင်း မြန်ခြင်းပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း အသားပြားခြင်း အသက်ရူမြန်ခြင်းဖျော့ခြင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းသတိမေ့ခြင်း ချောင်းဆိုးသွေးအန်ခြင်းခေါင်းလည်ပင်းဗိုက်တွင်မြင်သာသောဒဏ်ရာရှိခြင်း။
၅။ အရိုး အဆစ်နှင့် ကြွက်သားထိခိုက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
အချို့သောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ပုံစံတစ်ခုတည်းတွင်အကြာကြီးနေခြင်းကိုရှောင်စေပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသောပုံစံမျိုးစုံတွင်ရှိနေပါစေ။ ပုံစံတစ်ခုတည်းအကြာကြီးထားပါက ကြွကာ်သားများ ပင်ပန်းလာခြင်း အဆစ်များထိခိုက်လွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဥပမာ ခါးမှရှေ့သို့ကွေးထားခြင်း။ သင့်ကလေးအားတစ်နှစ်ပါတ်လုံး အားကစားတစ်ခုတည်းကစားခွင့်မပြုပါနှင့်- အနားယူခြင်း အခြားအားကစားစားခြင်းတို့က ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်းမြင့်တတ်စေသည်။
သင်ကလေးအရိုးအဆစ် ကြွက်သားထိခိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ကျန်းမာစွာနေပါ။ ကျန်းမာသောခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းထားခြင်းနှင့် ကြွက်သားများသန်မာအောင်လုပ်ခြင်း က အဆစ်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
Muscle cramp. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00200. Accessed August 19,2016
Joint pain. https://medlineplus.gov/ency/article/003261.htm. Accessed August 19,2016
Muscle strain. http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/ConditionsandDiseases/MuscleBoneandJointDisorders/Pages/Muscle-Strain.aspx. Accessed August 19,2016
Bone, joint and muscle injuries. http://www.guidetochildcare.org/bone-joint-and-muscle-injuries.htm. Accessed August 19, 2016
Bone, Muscle, and Joint Injuries: How To Treat With First Aid. http://infolific.com/health-and-fitness/first-aid/bone-muscle-joint-injuries/. Accessed August 19,2016
Bone, muscle and joint trauma. https://seasonsmedical.com/medical-library/bone-muscle-and-joint-trauma/. Accessed August 19,2016